Redmi kwesịrị ịmụta ọtụtụ ihe na Huawei, kwuru Lu Weibing | Gam akporosis
Redmi kwesịrị ịmụta ọtụtụ ihe na Huawei, ka Lu Weibing na-ekwu
Mgbe ị na-arụ ọrụ na Xiaomi ruo ọtụtụ afọ, Redmi bụzi ụlọrụ nọọrọ onwe ya na Lu Weibing ka a họpụtara General Manager nke ụlọ ọrụ. Kemgbe ahụ, ọ nọ na-arụsi ọrụ ike na Weibo, na-ekwu maka ọbịbịa na ngwaahịa ọhụrụ, na ọbụlagodi ịjụ ajụjụ ndị ọrụ.
Na mkparịta ụka yiri nke ahụ, Lu Weibing ji ezi uche zaa ajụjụ banyere onye kachasị ya na Xiaomi… Ajụjụ bụ «Nsogbu ndị Xiaomi zutere iji merie Huawei?».
Site na ikwu okwu, Lu Weibing kwetara na Xiaomi bụ onye amaara nke ọma maka ọnụego ya / arụmọrụ ya wee kwuo na ekwesiri ị nye R&D nha nha na nkwalite ngwaahịa a n'ụzọ ziri ezi.
Ndị isi ahụ kwukwara nke ahụ Akụkọ ọgaranya nke Huawei nke 32 nke afọ na-eme ka njem ahụ sie ike maka Xiaomi, nke dị naanị afọ 9. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ ahụ na-ama ụma na-arụ ọrụ, na-emezi ma na-amụta site na Huawei.
Onye isi njikwa Xiaomi kwenyere na Xiaomi choro Huawei dika uwa choro ya. Companylọ ọrụ ọ bụla na-arụ ọrụ dị iche iche dabere na ụkpụrụ na ngwaahịa ha. N'agbanyeghị ịgbasawanye gburugburu ụwa, ha ga-arụ ọrụ iji baara ndị ọrụ njedebe uru.
N'ozuzu, ọ gaghị ekwe omume ụlọ ọrụ dị ka Xiaomi igbo mkpa nke ndị ọrụ niile. N'ihi ntakịrị akụrụngwa na nnweta, dị ka ọ dị ugbu a, onye nrụpụta China na-ezube ịkwado ndị ọrụ pere mpe. Agbanyeghị, Xiaomi na-achọ ịgbanye pọtụfoliyo ngwaahịa ya site n'ịmụta ihe na Huawei n'oge na-abịanụ, nke doro anya nwere ahụmịhe karịa.
Nyochaa Xiaomi Redmi Rịba ama 7
Huawei, maka nke ya, zigara ihe karịrị 59 nde smartphones na nkeji iri na ise nke 2019, na Xiaomi nwekwara ọganihu ma e jiri ya tụnyere nke anọ nke anọ nke 2018. Agbanyeghị, gbasara ọnụ ọgụgụ ahịa, Xiaomi ka nọ n’azụ Huawei.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Redmi kwesịrị ịmụta ọtụtụ ihe na Huawei, ka Lu Weibing na-ekwu
OUKITEL K12: Ama ama ohuru
Nyocha Google na mmegharị ọhụụ ewepụtara na Xiaomi